तनावै तनावमा बितेको हरिप्रसाद पराजुलीको एक वर्ष ! – YesKathmandu.com
अघिल्लो वर्ष ठीक यहि दिन देश विदेश भर चर्चामा थिए कृषि मन्त्री हरि प्रसाद पराजुली । तत्कालिन समयका कृषि मन्त्री उनी कृषि मन्त्रीका रुपमा नभई किस मन्त्रीका रुपमा चर्चा र विवादमा रहे । कृषि मन्त्रीको यही किस काण्डले उनी यति धेरै आलोचित भए कि मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा आइपुगे । त्यस यता गुमनाम बनेका मन्त्री पराजुली अहिले के गर्दै होलान ? यो चासो र जिज्ञासाको विषय हुँदै हो ।
नेकपा एमाले भित्रका माक्र्सवादको गहिरो अध्ययन भएका नेता मध्येका एक हुन् पराजुली ।तर,जिन्दगीमा कहिले काही सानो असाबधानीका कारण कत्रो आलोचना र भुक्तमानको पात्र हुनुपर्दछ भन्ने उदाहरण पनि हुन पराजुली । कृषि निकै राम्रो दख्खल राख्ने पराजुली को व्यक्तित्व प्रति एमालेकै नेताहरु प्रशंशा गर्दै भन्छन खाशमा बामदेबलाई बामदेब बनाएकै पराजुलीले हो ।’
बफदार पराजुलीलाई मौकामा चौका हान्दै बामदेबले पाएको बेलामा मन्त्री बनाइदिएका थिए । मन्त्री भएसंगै उनको भुमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको थियो । अहिले उनलाई एमालेले मनोनित केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । किसान महासंघको उनी उपाध्यक्ष छन् ।
फुर्कने र हौसिने बानीले उनलाई बर्बाद बनाएको उनी निकट रहेकाले बताए । उनले टेलिभिजन अन्तवार्तामा भनेका थिएः फुच्चेमन्त्री भन्दै दिदीबहिनीले हिलो छ्यापेपछि वातावरण रमाइलो भयो । मलाई हिलो लागेपछि मैले पनि लगाइदिएको हुं । खाशै केही भएको होइन । उनले खाशै केही नभएको भने पनि उनका लागि सो घटनाले सबै गरिदियो । आज पनि उनका बारेमा मान्छेले चर्चा गर्छन । जहां जांदा पनि कानेखुशी गर्छन । हिजो नजिकै आएर बस्ने पार्टीभित्रका चेलिबेटी सार्वजनिक स्थलमा परपर सर्छन् । त्यसैले त मान्छेहरु सम्झन्छन असार १५ आउने वित्तिकै हरि प्रसाद पराजुलीलाई ।सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ असार १५ पछाडिको एक वर्ष हरि प्राद पराजुलीले कति तनावपूर्ण रुपमा बिताए होला ?
थारुलाई रौं पनि दिन्न भनेको होइनः देउवा